I-china KQH Series Single Stage Vertical Chemical Pump abakhiqizi nabaphakeli | IKAIQUAN
Ubunjiniyela bamakhemikhali, ukuhambisa imikhiqizo kawoyela, ukudla, isiphuzo, imithi, ukwenziwa kwephepha, ukwelashwa kwamanzi, ukuvikelwa kwemvelo, ezinye i-asidi, i-alikhali, usawoti njll.
Ukugeleza: 2.2-480m3 / h
Motor amandla: 0.12-90kW
Ijubane: 1480r / min noma 2960r / min
Ubuningi ingcindezi ukusebenza: .61.6MPa
Ukushisa okulingene: -10 ℃ ~ 80 ℃
1. Lolu chungechunge lwamaphampu amakhemikhali amabi oketshezi amile mpo, izindawo zokudonsa nezokukhipha zepompo zinobubanzi obufanayo, futhi imigqa yazo emaphakathi isemugqeni ofanayo ovundlile futhi i-orthogonal kushaft mpo. I-impeller isakhiwo esivaliwe. Ukwesekwa kwepompo kuxhomeke ngqo kupuleti eliphansi elihlanganiswe nomzimba wepompo.
2. Lolu chungechunge amaphampu we-centrifugal single angaqaqa i-rotor (kufaka phakathi imoto) yesondlo ngaphandle kokuhambisa umzimba wepompo kanye ne-inlet kanye ne-outlet exhuma amapayipi.
3. Idizayini yokuhlukanisa shaft yalolu chungechunge lwamaphampu ngokuyisisekelo igwema ukulimala kushaft yezimoto okubangelwa ukugqwala. Qinisekisa ngokuphelele ukusebenza okuzinzile nokunokwethenjelwa kwesikhathi eside kwemoto.
4. Izimpawu zamashafula zalolu chungechunge amaphampu we-centrifugal zisebenzisa izimpawu zamakhemikhali ezakhelwe ngaphakathi, ezinesiphetho esisodwa, ezingalingani.
5. Ukwethenjwa nenoveli shaft shaft isakhiwo salolu chungechunge lwamaphampu kungakhetha kalula isakhiwo seB5 motor ejwayelekile ukushayela ngqo ipompo lamanzi.
6. Isakhiwo salolu chungechunge olujikeleza impompo yamakhemikhali silula futhi kulula ukusigcina. Lapho shaft futha idinga ukushintshwa, kulula ukuqaqa nokufaka, futhi ukuma kwayo kunembile futhi kunokwethenjelwa.
7. Lolu chungechunge ukudluliswa kwamakhemikhali imiphini yamaphampu nezinsimbi zemoto zixhunywe ngokuqinile, futhi ukucubungula okuthuthukile nokunengqondo nobuchwepheshe bomhlangano kwenza imiphini yepompo ibe nokugxila okuphezulu, ukudlidliza okuphansi nomsindo ophansi.
8. Lolu chungechunge lwamaphampu namaphampu luhlanganisiwe lwafakwa lubheka phezulu. Uma kuqhathaniswa namaphampu amakhemikhali avundlile esakhiwo esijwayelekile, inganciphisa kakhulu indawo yeyunithi futhi ilondoloze utshalomali olukhulu.
Chemical Pump, Imboni Pump, Chemical Pump, Imboni Chemical, Pump Pump, Amakhemikhali Pump Pump, Amakhemikhali Pump Pump, Chemical-Centrifugal Pump, Chemical-Centrifugal Pump, Chemical Pump Centrifugal, Engagqwali Centrifugal Chemical Pump, Chemical Centrifugal Engagqwali Pumps, njll.
Langaphambilini KZJ Series slurry Pump
Olandelayo: I-KQWH Series Single Stage Horizontal Chemical Pump
Izinsiza kusebenza ze-KQGV Water Supplier (Booster Pump)
I-DG / ZDG Pump Boiler Okuphakelayo
I-KQW Single Stage Horizontal Centrifugal Pump
I-KQL Direct-coupled in-line Single Stage Vertica ...